ဒိနျခဉျြဖောကျနညျး (၃) နညျးနှငျ့ ဒိနျခဉျြကောငျးမကောငျးကွညျ့နညျး – Youth Bar
ဒိနျခဉျြဖောကျနညျး (၃) နညျးနှငျ့ ဒိနျခဉျြကောငျးမကောငျးကွညျ့နညျး
ဒိနျခဉျြဖောကျနညျး (၃) နညျးနှငျ့ ဒိနျခဉျြကောငျးမကောငျးလလေ့ာမယျ
နှားနို့ 50သားလောကျကြိုပွီး အအေးခံထား။ အပူလြော့ပွီး မအေးသေးတယျ့အနထေားမှာ ထမငျးစားဇှနျးတဈဇှနျးစာလောကျအခဉျြထညျ့မှပေေး။
ပွီးရငျပလပျစတဈ အပေါကျလေးတှဖေောကျပီး၊ အုပျထား။ 8နာရီလောကျဆိုရပွီ (မလှုပျမိစနေဲ့နျော)
အခဉျြဆိုတာက နှားနို့ အစိမျးကို အခနျးအပူခြိနျမှာ အကွမျးပနျးကနျ တဈလုံးစာ ဒီတိုငျးထား ရငျ 24နာရီမှာ အခဉျြဖွဈပါတယျ (ဒါမလုပျခငျြရငျ ဒိနျခဉျြတဈဇှနျး ဆိုလညျးရတယျ။ )
Khaing Thet Mon
အစအဆုံးလုပျခငျြတယျဆိုရငျ ပထမနမှေ့ာ နှားနို့အစိမျး လကျဖကျရညျတပနျးကနျလုံးလောကျကို အခနျးအပူခြိနျ အတိုငျး ၂၄နာရီပွညျ့အောငျ့ အခဉျြခံထားပါ။ (ဥပမာ-ကွောငျအိမျထောငျ့ တနရောရာမှာဖွဈဖွဈထား)
ဒုတိယနမှေ့ာ နှားနို့ တပိဿာ ကွိုပါ။ လကျညှိုးထိုးကွညျ့လို့ရတဲ့ အပူရှိနျလောကျဆိုရငျ မနကေ့အခဉျြခံထားတဲ့ နှားနို့တှထေညျ့ပွီး နှံ့အောငျမှပေါ။
ပွီးရငျ ကွှဖွေဈဖွဈ၊ ဖနျဖွဈဖွဈ၊ မွအေိုးဖွဈဖွဈ ဒိနျခဉျြလုပျမယျ့ ခှကျတခုခုထဲကို ထညျ့ပါ။ အလှယျတကူမထိ၊ မလှုပျအောငျ အဖုံးမဖုံးဘဲ ထားပါ။ မထိ၊ မလှုပျပါနဲ့။ ၁၄နာရီလောကျ ကွာရငျ တော့ဒိနျခဉျြရပါပွီ။
အဲဒီတော့မှ အဖုံးဖုံးပွီး ရခေဲသတောထဲထညျ့ပါ။ တပတျလောကျခံပါတယျ။ နောကျတကွိမျထပျလုပျဖို့အတှကျ ဒိနျခဉျြ လကျဖကျရညျပနျးကနျနဲ့ တခှကျစာသပျသပျသိမျးထားပါ။
နောကျတခါ ဒိနျခဉျြလုပျတဲ့အခါ သိမျးထားတဲ့ဒိနျခဉျြကို ထညျ့မှပွေီး ထပျလုပျရုံပဲ။ နို့ခဉျြခံစရာ အဲဒါဆိုရငျမလိုတော့ဘူး။အဲနညျးအတိုငျး လုပျတာပါပနျးကနျကိုတော့ ခဲမခဲ လှုပျကွညျ့မိတယျ
ရောငျးတနျးဝငျ အိုးလေးဒိနျခဉျြလုပျနညျး (၃)
ဒိနျခဉျြလုပျနညျးတှေ အမြားအပွား ရှိပါတယျ။ အလှယျနညျး၊ အခကျနညျး၊ ရောငျးတနျးအတှကျ လုပျနညျး စသဖွငျ့ အနညျးငယျစီသာ ကှာခွားပါတယျ။အလှယျနညျး ပွောနတွေတာကတော့ နှားနို့ထဲကို ဒိနျခဉျြထညျ့ထားလိုကျရငျ ဒိနျခဉျြဖွဈသှားတယျ ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီဒိနျခဉျြအနညျးငယျကို ဘယျလိုလုပျမလဲ။ အဲဒါကို အခု စပွောပွပါမယျ။ အိုးကို မွအေိုးရှိပါက ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ အခွားအိုးနဲ့လညျး ရနိုငျပါတယျ။အရငျဆုံး နို့အခဉျြ စလုပျရမယျ ( ကိုယျဘာသာအခဉျြမဖောကျခငျြလို့ လုပျပွီးသားဒိနျခဉျြ ကိုလဲ ရောထညျ့လဲရတယျ )
(၁) အိုးသဈတဈလုံးကို သနျ့ရှငျးပွီး ခွောကျအောငျထားပါ။
(၂) ၄ငျးအိုးထဲကို ကြိုထားသောနှားနို့ စားပှဲတငျဇှနျး ၄ ဇှနျးခနျ့ ထညျ့ပါ။
(၃) အိုးကို အဖုံးအုပျထားပွီး နပေူထဲမှာ ၆ နာရီခနျ့ ခထြားပါ။
(၄) အိုးထဲမှနှားနို့မြား ခဲသှားသှားပွီး အခဉျြနံ့လေး ထှကျလာရငျ ဒိနျခဉျြစလုပျလို့ ရပါပွီ။
(၁) ဒိနျခဉျြပွုလုပျမညျ့ နှားနို့ကို အိုးသနျ့သနျ့ဖွငျ့ ၁၀ မိနဈခနျ့ ဆူပှတျလာအောငျ တညျပါ။ (အပူ ဖာရငျဟို 200 ခနျ့ ရှိရပါမယျ)
(၂) ပွီးလြှငျ အောကျခထြားပွီး ကွကျသီးနှေးလေးအထိ (112 to 115 ဖာရငျဟိုကျ)ခနျ့ အအေးခံပေးပါ။
(၃) အနညျးငယျ နှေးသော အနအေထားမှာ အထကျက ဒိနျခဉျြလုပျထားသော အိုးထဲကို အနညျးငယျ လောငျးထညျ့ပွီး ခဲနတေဲ့ဒိနျခဉျြကို ကွအေောငျခပြေေးပါ။
(၄) ဒိနျခဉျြအိုး တညျထားမညျ့နရောကို ရှေးပါ။ အပူခြိနျ 110 ဖာရငျဟိုကျ ရှိရမညျ။ အိုးမလှုပျနိုငျသညျ့နရောမှာ ထားလြှငျ ပိုကောငျးမညျ။
(၅) ဒိနျခဉျြခထြေားသော အိုးထဲကို တညျထားသောနှားနို့မြား အကုနျလောငျးထညျ့ပွီး အဖုံးလုံအောငျ ပိတျထားပါ။ နို့ဒိနျခဉျြမကှဲအောငျ အိုးကို ရှခွေ့ငျး၊ မခွငျးမပွုရပါ။
(၆) နရောအပူခြိနျပျေါ မူတညျပွီး ၅ နာရီမှ ၇ နာရီခနျ့ထိ ထားပေးပွီးလြှငျ ဒိနျခဉျြကို မွညျးကွညျ့ပွီး ကိုယျလိုအပျသညျ့ အခဉျြ အနတေျောဖွဈလြှငျ စတငျသုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
ဒိနျခဉျြနှငျ့အလိုကျဖကျဆုံးသော အစားအစာမှာ စတျောဘယျရီသီး ဖွဈပါတယျ။အခဉျြအရသာ ထပျမပိုစရေနျ ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့၍ လိုအပျသလောကျသာ ပုဂံထဲထညျ့စားနိုငျပါတယျ။ ကုနျခါနီးလြှငျ လကျကနျြဒိနျခဉျြဖွငျ့ နောကျထပျ ဒိနျခဉျြအသဈတဈအိုးကို ဆငျ့ပှါးလုပျနိုငျပါတယျ။ကိုအောငျမွငျ့မွတျ
ဘယျအခြိနျမှာဒိနျခဉျြပကျြသှားတတျသလဲ? အခဉျြဖောကျထားတဲ့အရာပဲ… ပကျြသှားတတျလို့လား?
ဟုတျကဲ့။ ပကျြသှားတတျပါတယျ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ စားဖို့မသငျ့တျောတော့ဘူးပေါ့။ ဘယျအရာမှာမဆို သကျတမျးဆိုတာရှိပါတယျ။
အဓိက အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးအတှကျ တနျဆေး၊လှနျဘေး ဖွဈသှားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒိနျခဉျြ ပကျြသှားတတျတဲ့သဘောလေးသိထားရငျ အစာအိမျကနျြးမာရေး အားနညျးတဲ့သူတှအေတှကျ၊ ဝမျးပကျြလှယျတဲ့သူတှအေတှကျ သတိထားစားသုံးနိုငျကွဖို့ အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။
ဒါဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုးဆို ဒိနျခဉျြပကျြပွီလို့ ယူဆကွမလဲ?
ဒျေါကွီးငယျတို့ သသေခြောခြာ စာတှဖေတျလလေ့ာထားတာရယျ၊ ဒိနျခဉျြအပကျြခံပွီး စမျးသပျထားတာလေးတှရေယျကို အခွခေံပွီး မြှဝပေေးမယျနျော။
အရသာ ။ခဉျြတဲ့အရသာ (အရမျးပွငျးတာလဲရှိတယျ၊ ခပျစိမျ့စိမျ့လေးလဲရှိတယျ)ဟာ ဒိနျခဉျြရဲ့ ပုံမှနျသဘာဝပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒိနျခဉျြကိုစသောကျလိုကျတာနဲ့ စပါကလငျလို စူးရှရှအရသာ လြှာပျေါမှာခံစားလိုကျရပွီဆိုရငျ မသောကျပါနဲ့တော့နျော။
အနံ့ ။ဒိနျခဉျြမှာ နို့ခဉျြနံ့ထှကျနတောဟာ ပုံမှနျသဘာဝပါ။ ဒါပမေယျ့ ခဉျြစူးစူးနဲ့ အတျောပွငျးထနျတဲ့အခဉျြအနံ့ကိုရရငျတော့ ဒိနျခဉျြဟာ သကျတမျးကွာနလေောကျပွီး သာမာနျအခနျးအပူခြိနျနဲ့ ထိတှတေ့ာကွာနပွေီလို့ သတျမှတျနိုငျတာမို့ မသောကျသုံးပါနဲ့တော့နျော။
အမွငျ။မှိုအညိုရောငျလေးတှစှေဲနပွေီ၊ ပူစီပေါငျးလေးတှေ ထနပွေီဆိုရငျ သိပျကိုသခြောပါတယျ။ အကြိုးပွု ဘကျတီးရီးယားလေးတှကေုနျလို့ ဒိနျခဉျြ ပကျြနပေါပွီ။ မသောကျသုံးပါနဲ့တော့နျော။
အခြိနျကာလ။ USDA ရဲ့ လလေ့ာခကျြအရ ဒိနျခဉျြပွုလုပျပွီးရကျကနေ ၂ပတျအထိ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာထားရငျ အထားခံပါတယျ။ စားသုံးဖို့လဲ စိတျခရြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဖုံးဖှငျ့လိုကျတာတို့၊ တဝကျစားပွီး တဝကျကနျြတာတို့ (ဇှနျးအသနျ့နဲ့ခပျဖို့လိုပါတယျ) ဆိုရငျတော့ ၅ရကျ – ရရကျ အတှငျးမှာပဲ စိတျခစြှာစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
ကဲ …. အခုဆိုရငျ ဒိနျခဉျြကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အခဈြတို့လဲ ဒိနျခဉျြအကွောငျးနောကျတခုထပျသိသှားပွီပေါ့နျော။
စားသုံးသူတှအေတှကျ အမွဲစတေနာရှထေ့ားမယျ့ ဒျေါကွီးငယျ ။။
ဒိန်ချဉ်ဖောက်နည်း (၃) နည်းနှင့် ဒိန်ချဉ်ကောင်းမကောင်းလေ့လာကြည့်မယ်
နွားနို့ 50သားလောက်ကျိုပြီး အအေးခံထား။ အပူလျော့ပြီး မအေးသေးတယ့်အနေထားမှာ ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာလောက်အချဉ်ထည့်မွှေပေး။
ပြီးရင်ပလပ်စတစ် အပေါက်လေးတွေဖောက်ပီး၊ အုပ်ထား။ 8နာရီလောက်ဆိုရပြီ (မလှုပ်မိစေနဲ့နော်)
အချဉ်ဆိုတာက နွားနို့ အစိမ်းကို အခန်းအပူချိန်မှာ အကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံးစာ ဒီတိုင်းထား ရင် 24နာရီမှာ အချဉ်ဖြစ်ပါတယ် (ဒါမလုပ်ချင်ရင် ဒိန်ချဉ်တစ်ဇွန်း ဆိုလည်းရတယ်။ )
အစအဆုံးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပထမနေ့မှာ နွားနို့အစိမ်း လက်ဖက်ရည်တပန်းကန်လုံးလောက်ကို အခန်းအပူချိန် အတိုင်း ၂၄နာရီပြည့်အောင့် အချဉ်ခံထားပါ။ (ဥပမာ-ကြောင်အိမ်ထောင့် တနေရာရာမှာဖြစ်ဖြစ်ထား)
ဒုတိယနေ့မှာ နွားနို့ တပိဿာ ကြိုပါ။ လက်ညှိုးထိုးကြည့်လို့ရတဲ့ အပူရှိန်လောက်ဆိုရင် မနေ့ကအချဉ်ခံထားတဲ့ နွားနို့တွေထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပါ။
ပြီးရင် ကြွေဖြစ်ဖြစ်၊ ဖန်ဖြစ်ဖြစ်၊ မြေအိုးဖြစ်ဖြစ် ဒိန်ချဉ်လုပ်မယ့် ခွက်တခုခုထဲကို ထည့်ပါ။ အလွယ်တကူမထိ၊ မလှုပ်အောင် အဖုံးမဖုံးဘဲ ထားပါ။ မထိ၊ မလှုပ်ပါနဲ့။ ၁၄နာရီလောက် ကြာရင် တော့ဒိန်ချဉ်ရပါပြီ။
အဲဒီတော့မှ အဖုံးဖုံးပြီး ရေခဲသေတာထဲထည့်ပါ။ တပတ်လောက်ခံပါတယ်။ နောက်တကြိမ်ထပ်လုပ်ဖို့အတွက် ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်နဲ့ တခွက်စာသပ်သပ်သိမ်းထားပါ။
နောက်တခါ ဒိန်ချဉ်လုပ်တဲ့အခါ သိမ်းထားတဲ့ဒိန်ချဉ်ကို ထည့်မွှေပြီး ထပ်လုပ်ရုံပဲ။ နို့ချဉ်ခံစရာ အဲဒါဆိုရင်မလိုတော့ဘူး။အဲနည်းအတိုင်း လုပ်တာပါပန်းကန်ကိုတော့ ခဲမခဲ လှုပ်ကြည့်မိတယ် /Nwe Nwe Htun
ရောင်းတန်းဝင် အိုးလေးဒိန်ချဉ်လုပ်နည်း (၃)
ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ အလွယ်နည်း၊ အခက်နည်း၊ ရောင်းတန်းအတွက် လုပ်နည်း စသဖြင့် အနည်းငယ်စီသာ ကွာခြားပါတယ်။အလွယ်နည်း ပြောနေတြတာကတော့ နွားနို့ထဲကို ဒိန်ချဉ်ထည့်ထားလိုက်ရင် ဒိန်ချဉ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဲဒါကို အခု စပြောပြပါမယ်။ အိုးကို မြေအိုးရှိပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အခြားအိုးနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။အရင်ဆုံး နို့အချဉ် စလုပ်ရမယ် ( ကိုယ်ဘာသာအချဉ်မဖောက်ချင်လို့ လုပ်ပြီးသားဒိန်ချဉ် ကိုလဲ ရောထည့်လဲရတယ် )
(၁) အိုးသစ်တစ်လုံးကို သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။
(၂) ၄င်းအိုးထဲကို ကျိုထားသောနွားနို့ စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်းခန့် ထည့်ပါ။
(၃) အိုးကို အဖုံးအုပ်ထားပြီး နေပူထဲမှာ ၆ နာရီခန့် ချထားပါ။
(၄) အိုးထဲမှနွားနို့များ ခဲသွားသွားပြီး အချဉ်နံ့လေး ထွက်လာရင် ဒိန်ချဉ်စလုပ်လို့ ရပါပြီ။
(၁) ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်မည့် နွားနို့ကို အိုးသန့်သန့်ဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့် ဆူပွတ်လာအောင် တည်ပါ။ (အပူ ဖာရင်ဟို 200 ခန့် ရှိရပါမယ်)
(၂) ပြီးလျှင် အောက်ချထားပြီး ကြက်သီးနွေးလေးအထိ (112 to 115 ဖာရင်ဟိုက်)ခန့် အအေးခံပေးပါ။
(၃) အနည်းငယ် နွေးသော အနေအထားမှာ အထက်က ဒိန်ချဉ်လုပ်ထားသော အိုးထဲကို အနည်းငယ် လောင်းထည့်ပြီး ခဲနေတဲ့ဒိန်ချဉ်ကို ကြေအောင်ချေပေးပါ။
(၄) ဒိန်ချဉ်အိုး တည်ထားမည့်နေရာကို ရွေးပါ။ အပူချိန် 110 ဖာရင်ဟိုက် ရှိရမည်။ အိုးမလှုပ်နိုင်သည့်နေရာမှာ ထားလျှင် ပိုကောင်းမည်။
(၅) ဒိန်ချဉ်ချေထားသော အိုးထဲကို တည်ထားသောနွားနို့များ အကုန်လောင်းထည့်ပြီး အဖုံးလုံအောင် ပိတ်ထားပါ။ နို့ဒိန်ချဉ်မကွဲအောင် အိုးကို ရွှေ့ခြင်း၊ မခြင်းမပြုရပါ။
(၆) နေရာအပူချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ၅ နာရီမှ ၇ နာရီခန့်ထိ ထားပေးပြီးလျှင် ဒိန်ချဉ်ကို မြည်းကြည့်ပြီး ကိုယ်လိုအပ်သည့် အချဉ် အနေတော်ဖြစ်လျှင် စတင်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒိန်ချဉ်နှင့်အလိုက်ဖက်ဆုံးသော အစားအစာမှာ စတော်ဘယ်ရီသီး ဖြစ်ပါတယ်။အချဉ်အရသာ ထပ်မပိုစေရန် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်၍ လိုအပ်သလောက်သာ ပုဂံထဲထည့်စားနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ခါနီးလျှင် လက်ကျန်ဒိန်ချဉ်ဖြင့် နောက်ထပ် ဒိန်ချဉ်အသစ်တစ်အိုးကို ဆင့်ပွါးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကိုအောင်မြင့်မြတ်
ဘယ်အချိန်မှာဒိန်ချဉ်ပျက်သွားတတ်သလဲ? အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့အရာပဲ… ပျက်သွားတတ်လို့လား?
ဟုတ်ကဲ့။ ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စားဖို့မသင့်တော်တော့ဘူးပေါ့။ ဘယ်အရာမှာမဆို သက်တမ်းဆိုတာရှိပါတယ်။
အဓိက အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအတွက် တန်ဆေး၊လွန်ဘေး ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒိန်ချဉ် ပျက်သွားတတ်တဲ့သဘောလေးသိထားရင် အစာအိမ်ကျန်းမာရေး အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်၊ ဝမ်းပျက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက် သတိထားစားသုံးနိုင်ကြဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးဆို ဒိန်ချဉ်ပျက်ပြီလို့ ယူဆကြမလဲ?
ဒေါ်ကြီးငယ်တို့ သေသေချာချာ စာတွေဖတ်လေ့လာထားတာရယ်၊ ဒိန်ချဉ်အပျက်ခံပြီး စမ်းသပ်ထားတာလေးတွေရယ်ကို အခြေခံပြီး မျှဝေပေးမယ်နော်။
အရသာ ချဉ်တဲ့အရသာ (အရမ်းပြင်းတာလဲရှိတယ်၊ ခပ်စိမ့်စိမ့်လေးလဲရှိတယ်)ဟာ ဒိန်ချဉ်ရဲ့ ပုံမှန်သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ဒိန်ချဉ်ကိုစသောက်လိုက်တာနဲ့ စပါကလင်လို စူးရှရှအရသာ လျှာပေါ်မှာခံစားလိုက်ရပြီဆိုရင် မသောက်ပါနဲ့တော့နော်။
အနံ့ ဒိန်ချဉ်မှာ နို့ချဉ်နံ့ထွက်နေတာဟာ ပုံမှန်သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ချဉ်စူးစူးနဲ့ အတော်ပြင်းထန်တဲ့အချဉ်အနံ့ကိုရရင်တော့ ဒိန်ချဉ်ဟာ သက်တမ်းကြာနေလောက်ပြီး သာမာန်အခန်းအပူချိန်နဲ့ ထိတွေ့တာကြာနေပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်တာမို့ မသောက်သုံးပါနဲ့တော့နော်။
အမြင် မှိုအညိုရောင်လေးတွေစွဲနေပြီ၊ ပူစီပေါင်းလေးတွေ ထနေပြီဆိုရင် သိပ်ကိုသေချာပါတယ်။ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးတွေကုန်လို့ ဒိန်ချဉ် ပျက်နေပါပြီ။ မသောက်သုံးပါနဲ့တော့နော်။
အချိန်ကာလ။USDA ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်ပြီးရက်ကနေ ၂ပတ်အထိ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားရင် အထားခံပါတယ်။ စားသုံးဖို့လဲ စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖုံးဖွင့်လိုက်တာတို့၊ တဝက်စားပြီး တဝက်ကျန်တာတို့ (ဇွန်းအသန့်နဲ့ခပ်ဖို့လိုပါတယ်) ဆိုရင်တော့ ၅ရက် – ၇ရက် အတွင်းမှာပဲ စိတ်ချစွာစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ကဲ …. အခုဆိုရင် ဒိန်ချဉ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အချစ်တို့လဲ ဒိန်ချဉ်အကြောင်းနောက်တခုထပ်သိသွားပြီပေါ့နော်။
စားသုံးသူတွေအတွက် အမြဲစေတနာရှေ့ထားမယ့် ဒေါ်ကြီးငယ် ။။
မသိသူကြျောသှား သိသူဖျောစား ၁ ဂရနျကို (၁ဝဝ)ဒျေါလာနဲ့ရောငျးခနြတေဲ့ ဗနျဒါစနေဲ့ ဆေးဖကျဝငျ ဗနျဒါရှကျအကွောငျး